ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်ပို့နိုင်ဖို့ မြန်မာကို ဖိအားပေးမယ်လို့ နော်ဝေ သံအမတ်ပြော | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်ပို့နိုင်ဖို့ မြန်မာကို ဖိအားပေးမယ်လို့ နော်ဝေ သံအမတ်ပြော
A Rohingya Muslim refugee waits with others for food aid at Thankhali refugee camp in Bangladesh's Ukhia district on January 12, 2018. About 655,000 Rohingya have escaped to Bangladesh since August 2017 after the Myanmar army beganacampaign of rape and murder in Rakhine state. They joined the more than 200,000 refugees already living in Bangladesh who had fled previous violence in Rakhine. / AFP PHOTO / Munir UZ ZAMAN
ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်ပို့နိုင်ဖို့ မြန်မာကို ဖိအားပေးမယ်လို့ နော်ဝေ သံအမတ်ပြော
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိ ဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်ခေါ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ နော်ဝေက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဖိအားပေးမှုတွေ လုပ်သွားမယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေ သံအမတ်ကြီး ဆစ်ဆယ် ဘလီကင်က ပြောပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက မြန်မာနိုင်ငံဆီ ပထမအသုတ် ပြန်ပို့မယ့် ဒုက္ခသည် ၈၀၃၂ ဦး စာရင်းကို မြန်မာအစိုးရထံ ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်က ပေးခဲ့တဲ့ ဒုက္ခသည်စာရင်းကို စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်ပို့ရေးက အချိန်ရယူဖွယ်ရှိနေပြီး အတိအကျ အချိန်သတ်မှတ်နိုင်မှု မရှိသေးဘူးလို့ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် သတင်းတွေက ဖော်ပြပါတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်ပို့ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကြား သဘောတူညီမှုတွေ ရရှိခဲ့ပေမယ့် ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်ပို့ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြဿနာတွေက မြန်မာဘက်မှာ ရှိနေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ နော်ဝေသံ အမတ်ကြီးက ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒုက်ခသညျတှေ ပွနျပို့နိုငျဖို့ မွနျမာကို ဖိအားပေးမယျလို့ နျောဝေ သံအမတျပွော
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ရှိ ဒုက်ခသညျတှကေို ပွနျချေါရေးနဲ့ ပတျသကျလို့ နျောဝကေ မွနျမာနိုငျငံအပျေါ ဖိအားပေးမှုတှေ လုပျသှားမယျလို့ ဘင်ျဂလားဒရျှေ့နိုငျငံဆိုငျရာ နျောဝေ သံအမတျကွီး ဆဈဆယျ ဘလီကငျက ပွောပါတယျ။
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့က မွနျမာနိုငျငံဆီ ပထမအသုတျ ပွနျပို့မယျ့ ဒုက်ခသညျ ၈၀၃၂ ဦး စာရငျးကို မွနျမာအစိုးရထံ ပေးခဲ့ပွီးဖွဈပါတယျ။ ဘင်ျဂလားဒရျှေ့က ပေးခဲ့တဲ့ ဒုက်ခသညျစာရငျးကို စဈဆေးမှုတှေ လုပျဆောငျမှာ ဖွဈတာကွောငျ့ ဒုက်ခသညျတှေ ပွနျပို့ရေးက အခြိနျရယူဖှယျရှိနပွေီး အတိအကြ အခြိနျသတျမှတျနိုငျမှု မရှိသေးဘူးလို့ ဘင်ျဂလားဒရျှေ့ သတငျးတှကေ ဖျောပွပါတယျ။
ဒုက်ခသညျတှေ ပွနျပို့ရေးနဲ့ ပတျသကျလို့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နဲ့ မွနျမာနိုငျငံကွား သဘောတူညီမှုတှေ ရရှိခဲ့ပမေယျ့ ဒုက်ခသညျတှေ ပွနျပို့ရေးနဲ့ ပတျသကျလို့ ပွဿနာတှကေ မွနျမာဘကျမှာ ရှိနဆေဲ ဖွဈတယျလို့ နျောဝသေံ အမတျကွီးက ပွောခဲ့ပါတယျ။
Previous articleနယူးဇီလန်မှာ ဂီတာ ဆိုင်ကလုန်းတိုက်ခတ်၊ အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာ
Next articleအပူငွေ့ပေးထားတဲ့ ကားထဲ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ဂျာမန် စုံတွဲ သေဆုံး